ओली पक्षको चियापान, नेपाल पक्षको पत्रकार सम्मेलन ! - Shikhar Post Shikhar Post
ओली पक्षको चियापान, नेपाल पक्षको पत्रकार सम्मेलन !
नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिल्नुको साटो थप उत्कर्षतिर पुग्दै गर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।
ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुलाई बोलाइएको छ । तर सो चियापानमा माधव नेपाल पक्षको भने सहभागी नरहने भएको छ ।
मोबाइल एसएमसमार्फत उनले निम्तासहितको सन्देश पठाएपनि चियापान कार्यक्रममा नजाने नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
सोमबार मात्रै एमालेका दुई समूहबीच पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएको थियो । तर सो छलफलमा कुनै समझदारी नभएको र नेपाल समूहले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल समूहले बुधवार र बिहीवार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : मंगलवार, ३ चैत्र २०७७ ११:१३